फोरम र राजपाको एकता प्रसङ्गले तातेको प्रदेश दुई - Jhilko
धनुषा, १० चैत्र । मधेशको मुद्दामा केन्द्रीत मधेशवादी प्रमुख दुई दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीचको एककरणको चर्चाले प्रदेश दुई अहिले तातेको छ ।
बिगतमा पटक पटक दुई दलबीच एकताको प्रसङ्ग चल्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै मुर्त रुपमा लिन सकेको छैन् । तर राज्य बिखण्डनको मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा सिके राउतको आगमनसँगै यी दुई दल एकताका लागि औपचारिक रुपमा अघि बढेका छन् ।
दुबै दलको मधेश मुद्दा नै भए पनि फोरम सरकारमा सहभागी भएर महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ भने राजपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
एउटै मुद्दा भएर पनि यी दलहरु विगतमा किन मिल्न सकेनन् ? सिके राउत मूलधारमा फर्किएसँगै किन एकाएक फोरम र राजपाका नेताहरु एकताका लागि कसिएका हुन् ? के यो संयोग हो वा अरु केही ? यसले भोलि मधेशमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? यी र यस्ता प्रश्नले अहिले तराई मधेशको बजार गर्माएको छ ।
फोरम नेपालले राजपासँग एकता गर्न पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेर राजपालाई औपचारिक पत्र पठाएको केही समयपछि राजपाले पनि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी फोरमलाई वार्ताको ढोका खोलेको छ ।
दुबै दलले वार्ता समिति नै गठन गरी पार्टी एकताका लागि अघि बढे पनि तत्कालै एकता हुनेमा धेरैको विश्वास छैन । एउटा सत्तामा रहेको र अर्काे सत्ता बाहिर रहेको अवस्थामा छिटै यी दुबैबीच एकता भई हाल्नेमा स्वयम् ती दलका नेताहरु समेत विश्वस्त हुन सकेको देखिदैन् ।
यसरी दुई कित्तामा उभिएका यी दुई दलका नेताहरु एकताका लागि लचिलो किन बनेका होला भन्ने सबैको चासो र चर्चाको बिषय भने अहिले बनेको छ । यस बिषयमा मधेश राजनीतिका जानकारहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । कतिपयले यी दुईको एकता स्वाभाविक भएको भनिरहेका छन् भने कतिपयले सिके राउतको राजनीतिक मूलधारको अवतरणलाई कारण मानिरहेका छन् ।
बिगतमा भारतसँग नजिक रहेका यी दुई दलका नेताहरु भारतीय पक्षको दबाबका कारण पनि यी एकता गर्न लचिलो बनेको हुन सक्ने आँकलन गर्नेहरु पनि यहाँ छन् ।
मधेश राजनीतिकका जानकारमध्ये एक प्राध्यापक देवनारायण यादव भन्छन– ‘सिके राउत पृथकताबादी मुद्दा छाडेर जसरी मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गरे, त्यो सँगै मधेशमा राम्रो प्रभाब बनाएका फोरम र राजपा एकताका लागि अघि बढेको छ यो संयोग मात्र नभई दवाव हुन सक्छ ।” पछिल्लो समय तराई मधेशका युवाहरुको सिके राउतप्रति क्रेज बढेको थियो । एक्कासी सरकारसँग सम्झौता गरेर मूलधारमा फर्किएपछि फोरम र राजपाले दबाब महसुस गरेर आपसमा पार्टी एकता गर्न लचिलो बनेको हुन सक्ने उनको कथन छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडक आन्दोलन गर्ने चेताबनी दिइरहेका राजपालाई विगतको जस्तो मधेशमा सडक आन्दोलन तताउन सहज नभएकाले पनि फोरमसँग एकता गर्न अघि बढेको मधेश राजनीतिकका जानकारहरुको बुझाइ छ ।
बिगतमा फोरमले राम्रो साथ दिएकाले मधेश आन्दोलन अघि बढेको र अहिले फोरम सरकारमा भएकाले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन नसक्ने अनुमान गरेरै राजपाले फोरमसँग एकता गर्न चाहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बिस्तारै तराई मधेशका जिल्लामा आफ्नो पार्टीको प्रभाब कम हुँदै गएको र आगामी निर्वाचनमा पार्टी कमजोर हुन सक्ने अनुमान गरेर फोरम पनि राजपासँग एकता गर्न इच्छुक भएको जानकारहरुको बुझाइ छ । तर मुख्य नेतृत्वकै बिषयमा विवाद हुँदा फोरम राजपाबीच एकता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विगतको अनुभव छ । मधेश आन्दोलनदेखि गत निर्वाचनमा फोरम र राजपाबीच कार्यगत एकता भए पनि समय समयमा यी दुई दलका मुख्य नेताहरुबीच नेतृत्वको सवालमा विवाद हुँदै आएको थियो ।
२०७३ फागुन २३ गते तत्कालीन एमालेको मेची महाकाली यात्राको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु भएको स्मृतिमा गत फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादव, सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिल झा लगायत फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उपेन्द्र यादवकै कारण राजपा फोरम एकता हुन नसकेको भन्दै फोरमलाई सरकारबाट फिर्ता भएर पार्टी एकताका लागि आउन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले फोरम र राजपाबीच एकता नभएसम्म मधेश र मधेशीले अधिकार नपाउने भन्दै आपसमा फुटेका दलहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय आन्दोलनमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैले यी दुई दलको एकताको अभियान निष्कर्षमा पुग्ने हो वा विगतको जस्तै यसपाली पनि बीचमै गएर रोकिने हो त्यो भन्ने हेर्न केही बेर पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।
रवी ओडले राउटेको टोपी लाउँदा यस्तो देखियो
धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी
धार्मिक द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने खेल जारी
टोलीले छानविनको क्रममा घटनास्थल पुगी प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रुप दिँदैछ । गृहस्रोतका...
कुलेश्वरको खाद्य स्टोरमा आपूर्तिमन्त्री पुगेपछि....
सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो र समस्यामा परेका नागरिकलाई के कसरी राहत उपलब्ध गराउन...
हुवावेइलाई बिक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीले अनुमति पाउने
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चर्किदै गएपछि मेमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेइलाई...
सुनकोशीको बन्दीपुरमा खुल्यो सहकारीः कृषि र पर्यटनको आधार...
बन्दीपुर लेकमा पर्छ भने यहाँ बिभिन्न प्रकारका अमूल्य जडिबुटी पाइनुकासाथै यो आलुको...